"तलब आधा कटौती गरेर मद्दत गर्ने स्थितिमा थिए, तर लापोर्टका शब्दहरूले चोट पुर्‍यायो"
“तलब आधा कटौती गरेर मद्दत गर्ने स्थितिमा थिए, तर लापोर्टका शब्दहरूले चोट पुर्‍यायो”
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स संबाददाता November 1, 2021
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौं| फुटबल स्टार लिओनल मेस्सीले डीयारो स्पोर्ट सँग अन्तरवार्ताका क्रममा केही महत्वपूर्ण कुरा खुलाएका छन्।
बार्सिलोनाबाट बहिर्गमनपछि पेरिसमा परिवारसँगै आफू पनि व्यवस्थित भइसकेको कुरा उनले बताएका थिए।
बार्सिलोनाबाट पेरिस ट्रान्सफर आफूले त्यति ठूलो परिवर्तन हुने नसोचेको तर (समय अनुसार) भएको बताए।
केही समय अलि नौलो लागेपनि ठाउँको, रहनसहन र वातावरण मा अब आफू घुलमिल भइसकेको उनले जिकिर गरे।
बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोन लापोर्तले मेस्सीले पैसा नलीई बार्सिलोनाबाट खेल्न शोधेको भए के गर्नु हुन्थ्यो भन्ने प्रश्नमा उनले बताउँछन्:
“साँचो यो हो कि, मैले बस्नको लागि सम्भव सबै गरें, मलाई कुनै पनि समयमा सित्तैमा खेल्न भनिएको थिएन। मलाई मेरो तलब पचास प्रतिशतले कटौती गर्न भनियो र मैले कुनै समस्या बिना गरें। हामी क्लबलाई थप मद्दत गर्ने स्थितिमा थियौं। म र मेरो परिवारको इच्छा र चाहना बार्सिलोनामा बस्ने थियो।”
“मलाई कसैले सित्तैमा खेल्न भनेन तर एकै समयमा मलाई यस्तो लाग्छ कि अध्यक्षले भनेका शब्दहरू ठाउँ बाहिर छन्। तिनीहरूले मलाई चोट पुर्‍याए किनभने मलाई लाग्छ कि उसले त्यो भन्न आवश्यक छैन, यो तपाईंबाट स्वाभिमान निकाल्नु र यसको नतिजाहरू नलिनु, वा चीजहरूको जिम्मा लिनु जस्तै हो। यसले मानिसहरूलाई सोच्न वा एक प्रकारको शंका उत्पन्न गर्छ जुन मलाई लाग्छ कि म योग्य छैन।”
संगै उनले पेरिस संगको सम्झौता जहिले सकिए पनि बार्सिलोनामा पुनः खेल्ने नखेल्ने थाहा नभएको तर बस्नलाई भने अवश्य फर्किने बताए।
सातौं बेलुन डी ओर जित्नु हुन्छ त? भन्ने प्रश्नमा उनि भन्छन:
यदि म इमानदार छु भने, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मेरो सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार मैले राष्ट्रिय टोलीबाट हासिल गर्न सकें। त्यो उपलब्धि मेरो लागि धेरै संघर्ष र लडाइ पछिको थियो। सातौं बेलुन डी ओर साच्चई भन्नु पर्दा पागल हुनेछ। यदि होइन भने, केहि हुँदैन। मैले पहिले नै मेरो एक महान लक्ष्य हासिल गरेको छु। म जे भयो त्यसको लागि धेरै खुसी छु।
Posted in अन्तरष्ट्रिय फुटबल, फुटबलTagged #barcelona #Messi #psg
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौं| टोटेनह्यामले नुनो एस्पिरिटो सान्तोलाई बर्खास्त गरेपछि एन्टोनियो कोन्टेसँग आफ्नो कामको बारेमा अन्तिम चरणमा वार्ता गरिरहेको छ। इटालियन प्रशिक्षक कोन्टेले जुन २०२३ सम्मको सम्झौताको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न बुझेको छ। नुनोले मात्र चार महिना र १७ खेलहरू खेलाउदा बर्खास्त भएका छन्। सिजनको सुरुवातमा कोन्टे र टोटेनह्याम बीचको वार्ता […]
महत्वपुर्ण खेलमा आज बंगलादेशको सामाना गर्दै नेपाल !! खेल सम्बन्धि सबै जानकारी
विश्वकप छनौटमा शनिबार अर्जेन्टिना र उरुग्वे भिड्दै
युरो कप : विश्वबिजेता फ्रान्स हंगारी बिरुद्दको खेलमा बराबरीमा रोकियो !!
फुटबलका महँगा फ्लप ट्रान्सफर